Saraakiisha ANC oo Zuma ka dalbaday in uu iscasilo
Sunday July, 15 2018 - 21:58:48
Qofna hadal ma jeedin kulanka ka dib , balse warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegaysa in kulankaasi si rasmi ah loogu go'aansaday in laga dalbaday madaxwaynaha in uu iscasilo.
Mab'da ahaan wuu iska dhagatiri karaa dalabka xisbiga ee ah in uu xilka ka dago , balse taasi waxa ay horseedi kartaa in codka kalsoonida ay u qaadaan baarlamaanka taasi oo caddayn karta kala qaybsananta xooggan ee xisbiga dhexdiisa.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Economic Freedom Fighters horeyna u ahaa hogaamiyaha garabka dhalinyarada ee ANC Julius Malema, ayaa kulanka saraakiisha xisiga ANC ay yeesheen ku tilmaamay mid aan faa'ido lahayn.
Somalia:-Saraakiisha dowladda Somalia oo faah faahin ka bixiyay dagaalkii Moqokori+Khasaraha Ka Dhashay.
04/06/2018 - 09:37:21
Talyaaniga:-Wasiir Talyaani ah oo dalbaday in la xiro xerada qaxootiga ee Sicily+Sababta.
Washington:-Maraykanka kulan degdeg ah ka dalbaday Golaha Ammaanka+Arimaha Soo Kordhay.
30/05/2018 - 09:33:04
Garowe:Madaxweyne Gaas oo laga helay warqad uu Madaxweyne Farmaajo ugu sharraxayo Jabkii ka gaadhay Dagaalki Tukeraq kana Dalbaday Ciidan Hub Iyo Lacag.
18/05/2018 - 15:29:14
Wararka Caalamka:Xabsi 12 Sano ah oo Manta U Bilaabmaya Madaxwaynihii Hore Brazil iyo Jacob Zuma Oo Loo Haysto Musuq Maasuq uu Sameeyey 1990 +18 Dacwadood oo ay wajahayso Madaxweynihi hore Kuuriyada Koonfureed
06/04/2018 - 12:29:37
Somaliya:-Aqalka Sare oo dalbaday in loo keeno ciidamo Amisom oo amniga suga
24/03/2018 - 14:08:13
Maraykanka:-Trump oo dalbaday in dil lagu xukumo dadka daroogada ka ganacsada
20/03/2018 - 08:48:19
Somaliya:-Saraakiisha Madaxtooyadda Somaliya Oo Sheegay Inay Toogteen Rag Hubaysan
24/02/2018 - 07:17:01
15/02/2018 - 10:16:40